शेयर बजारमा पहिलोपटक शुक्रवार कारोबार : अर्ब पनि पुगेन कारोबार रकम, लगानीकर्ताले थाहै पाएनन् ? | आर्थिक अभियान
शेयर बजारमा पहिलोपटक शुक्रवार कारोबार : अर्ब पनि पुगेन कारोबार रकम, लगानीकर्ताले थाहै पाएनन् ?
जेठ ६, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ८२ अंकले घटेर २ हजार २३५ दशमलव ०९ बिन्दुमा झरेको छ ।
यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२३ धितोपत्रको २५ लाख २४ हजार २६८ कित्ता शेयर १९ हजार १०९ पटकमा रू.९३ करोड २२ लाख ६ हजार ८४ बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक शुक्रवार आज बजार खुलेको हो । नेपाल सरकारले शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेसँगै शेयर बजार आज देखि शुक्रवार खुला भएको हो ।
परिसूचक सँगै कारोबार रकममा कमि आएको छ । कतिपय लगानीकर्तालाई शुक्रवार बजार खुल्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि कारोबार रकम घटेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यद्धपि पछिल्लो सयम बजार घट्दो क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता आभाव लगायत नितीगत केही कुराहरुले गर्दा शेयर बजार प्रभावित भइरहेको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको आधारभुत पक्ष र प्राविधिक पक्ष हेरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
कारोबारमा आएका २२३ धितोपत्र मध्ये सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य २ दशमलव ७३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४६९ कायम भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य २ दशलमव ५९ प्रतिशत बढेर रू.३५१ दशमलव ९० पुगेको हो । शुक्रवार सबैभन्दा बढी शेयर मूल्य घट्नेमा तेह्रथुम पावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आज ४ दशमलव ९४ प्रतिशत घटेको हो । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४६० मा झरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ३ दशमलव ८९ प्रतिशत घटेर रू. ४२० कायम भएको हो । सर्वाधिक शेयर खरीद विक्री अरुण काबेली पावरको भएको छ । कम्पनीको रू. ३ करोड २ लाख बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू.४६६ रहेको छ ।
त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा हिमालयन डिष्टीलरीको रू. २ करोड ४ लाख बराबरको भएको हो । त्यसैगरी कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचक मध्ये म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो भने बाँकी सबै समूहको समूहगत सूचक समग्र घटेसँगै नेप्से परिसूचक घटेको हो ।
समूहगत परिसूचक घट्नेमा ब्यापार समूहको परिसूचक २ दशमलव ३८ प्रतिशत,अन्य समूहको २ दशमलव ०६ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समुहको १ दशमलव ४४ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत,जीवन बीमा समुहको १ दशमलव ११ प्रतिशत,लगानी समूहको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव २६ प्रतिशत,वित्त समूहको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको समूहगत परिसूचक शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले घटेको हो ।
समाज लघुवित्तले विशेष साधारण सभाको लागि बुक क्लोज मिति तय [२०७९ असार, २१]